Haddii aad u maleyneyso inay tahay mowjad cusub, meel casri ah oo qaxwaha lagu kulmo iyo hobnob, xaqiiqda kama fogaan kartid. Gudaha gudihiisa waxay u ekaayeen warshad lagu xadgudbay was waxaa jiray daaha kafeega iyo boodhka looska wax kasta oo aad eegto. Si fudud ayaad u soo gashay, waxaad dalbatay boorsadaada sagxadaha ah, waadna baxday. Wax fikrad ah kama haysto meesha digirtu ka timid, laakiin waxay ahaayeen kuwo cabsi badan. Milkiilayaashu waxay i bareen wax ku saabsan kafee-sameeyayaasha cusub ee bannaanka ku yaal oo aan lahayn dab-damiyayaal iyo karafikada dahaaran. Ma jiro qaxwo gubtay. Mmmm.
Waqtigaan oo kale, waxaan u guuray Denver waxaanan uga tagay daahfurka cusub ee aan helay. Denver, waxaan ka raadiyay xoogaa rooti kafee ah laakiin isku mid maahan. Starbucks ayaa yimid magaalada, in kastoo, waxaan u helay dhadhan digirta gubatay ee 'baagaga'. Uma maleynayo inaan waligey laqabsadey kharashka ama dhadhanka digirtaas, in kastoo! Waxaan ku bixin jiray 10 jeer lacagta kafeega sidii aan awalba isticmaali jiray!
Ku laadlaada Starbucks markii ugu horeysay ee ay fureen waxay ahayd wax macaan. Kuraasid kuraasta oo dhan, adoo ka dhigaya meel wanaagsan in lagu qabto kulanka aan loo baahnayn. Kuraasta raaxada leh waxay dadka ku casuuntay inay waqti badan ku qaataan Starbucks, in kastoo. Waxaan aqriyay in goobo badan oo tafaariiqda ah ay dhigtaan kuraas adag si dadku aysan u sii joogi doonin inta. Starbucks waxay u wareegeen bakhaarro waawayn iyo kuraas adag oo leh fadhi kursi nugul agagaarka.
Jane waxaa laga yaabaa inay yeelato timo cagaaran oo balaaran iyo laba wax oo ay ku mudayso meelo aan caadi ahayn, laakiin markii ay toogatay, waxaad daawaneysay iyadoo ku tababaraneysa farsamadeeda. Waxay ka wada hadli laheyd waxyaabaha aad jeceshahay iyo waxyaabaha aad neceb tahay xulashooyinka cabitaanka waxayna kuu soo jeedin doonaan dhowr talo oo ku saleysan khibradeeda qibrada leh. Waxaad dareentay qabow kaliya inaad halkaas joogto oo feejignaan lagaa siiyay. Waxaad dareentay mid gaar ah.
Laakiin khadadka ayaa sii weynaaday safka isku imaatinkuna waa inuu si hufan u kordhaa. Mashiinno cusub ayaa si otomaatig ah dhulka loo keenay, oo la buuxiyey oo la shubay tallaalka. Sixirku wuu dhammaaday… wax aan dhammaystirnayn, ma jiro tallaallo waqti dheer qaatay, aad u gaabnaa ama sababo badan lahaa. Kaba sii darane, baristasku waxay lumiyeen aqoontooda farsamada gacanta. Barista ma ahan wax kayar fanaaniinta marka loo fiiriyo qof ku dhajinaya burger King xaafadiisa.
Waxaan dhageysan lahaa raadiyaha markii aan soo jiito oo aan u dhiibo lacagteyda iyo madaxayga shaqada. Salaan malaha, wadahadal jawiga ah. Kaliya aniga iyo gaarigeyga. Sixirkii wuu baxay. Starbucks, waaya-aragnimadii aan ku ogaa, ayaa dhimatay.
Runtu waxay ahayd inaanan ogayn inaan runtii ku jiray Starbucks qaxwada. Oh - Waxaan u baahday hagaajinteyda sida dadka kale oo dhan, laakiin waxaan jeclahay astaanta, qaabka, shakhsiyadda guriga kafeega. Waan jeclaa inaan aado halkaas maxaa yeelay waxaan dareemay muhiim. Markaan bixiyay $ 5 cabitaan qaas ah, waxaan dareemay xitaa muhiimad dheeraad ah.
Meel jidka ah, Starbucks wuxuu bilaabay inuu xiirto takhasuska gaarka ah markiisa macaashka iyo waxtarka. Waxay joojiyeen samaynta me muhiimad dareemid. Waxay joojiyeen samaynta me dareen gaar ah. Waxay joojiyeen inay ahaadaan kuwo gaar ah. Starbucks waa sheeko layaableh - waxay kordhiyeen qiimaha cabitaanka guud waxayna naga heleen dhamaanteen. Laakiin way ina hayn kari waayeen. Kobaca, macaashka iyo waxtarka ayaa la wareegay ugu dambayntiina wax kasta oo bakhaarada ka mid ah ayay ku kala baxeen oo ahaa mid gaar ah.
IMHO, Waxaan u maleynayaa in Starbucks uu garaacay finalka musbaaska sanduuqa. Iyagu mar dambe khaas uma aha inay kugu soo dallacaan $ 5 cabitaan, hadda waxay bilaabeen inay yareeyaan badeecada keliya ee ugu weyn ee ay tilmaameen. Waa maalin murugo leh Starbucks.
Waxaan tan ku qoraayaa kafee aan ka jeclahay adduunka, oo ah dukaan gaar loo leeyahay. Caawa, barista Cassie wuxuu ii sameeyay soodhadh Talyaani ah oo qaali ah oo aniga ii ah iyada oo ku saleysan dood ku saabsan waxyaabaha aan jeclahay iyo waxyaabaha aan necebnahay (in ay sifiican u garaneyso). Alayna waxay iga dhigtay sandwich aad u kulul oo rooti duban ah oo ku jira bagel la shiilay (oo aan ku jirin liiska).
Waxaan ku qoray qoraalkan dhan wireless-ka bilaashka ah waxaanan fadhiistay qayb kamid ah waqtiga kursiga weyn ee barafka leh. Cassy iyo Alayna waxay la sheekaysanayaan, magac ahaan, macmiisha oo ay shubayaan darbooyin (oo dib u soo celinayaan haddii ay dheer yihiin ama aad u gaaban yihiin), iyaga oo si taxaddar leh ugu xirxiraya huurka.
Waxaa jira sheeko muhiim u ah halkan shirkadaha kale. Si fudud kuma sii wadi kartid inaad ku dallacdo "khaas" ka dibna waxaad ku foorarsataa wax kasta oo qaas ah. Starbucks wax qiimo dhimis ah kuma sameynin galabtii kafeega galabta, waxay sii qiimeeyeen sumcaddooda xitaa intaas ka sii badan.